ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator
AOX-QL စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု lineတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ သို့ ခှဲစိတျကုသ ထိန်းချုပ်မှု vတစ်ဦးlves.Our AOX-QL စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု lineတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နိုင် ဖြစ် cusသို့mized အညီ သို့ အဆိုပါ အထူး လိုအပ်ချက်များ ၏ cusသို့mers. အခြေပြု အပေါ် တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ ထုတ်ကုန် အပါအဝင် မြင့်သော perဘို့mတစ်ဦးnce ပေါင်းစုံ ဖွင့်, pတစ်ဦးrtl ဖွင့်,နှင့် lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs, ကျွန်တော်တို့ ၏fer တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးted solutiအပေါ်s ဘို့ တစ်ဦးll vတစ်ဦးlve အမျိုးအစားများ, rတစ်ဦးnging မှ bတစ်ဦးll vတစ်ဦးlves သို့ dတစ်ဦးmpers.
AOX-QL စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator စောငျ့ရှောကျဖို့ပိုအလိုလိုသိနှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေထောက်ခံမှုဝင်ရိုးထဲမှာညွှန်ပြချက်, တပ်ဆင်ပြီး။
2. torque ပြောင်းလဲမည်
AOX-QL စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု (AOX-QL-20/30/50/80 မှလွဲ. ) linear လျှပ်စစ် actuator ကိုအလိုအလျောက်အာဏာကိုလုပ်ကြံသောအားဖြင့်ကုိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဆို့ရှင်နှင့်လျှပ်စစ် actuator ရဲ့ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန် Overload ကာကွယ်မှုပေး။
AOX-QL စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်ရေး၏ installation အရွယ်အစား linear လျှပ်စစ် actuator ယင်းအဆို့ရှင်၏ installation အရွယ်အစားကိုက်ညီမပါဘူးဆိုရင်, နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်တွေ့ဆုံ, ထို့နောက်အခြားအဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုပါ။
1. AOX-QL စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်ရေး၏လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း linear လျှပ်စစ် actuator လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း၏သက်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားထုတ်ကုန်â၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည် Explosive အန္တရာယ်ရှိLocationsâအတွက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် installation အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်။
2. AOX-QL စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator မကြာခဏထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှင့်အတူနေရာ, အမြဲ connectors ကောင်းသောအဆက်အသွယ်နှင့်သော့ခတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိမရှိရှိမရှိ, အစွဲစေချောင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
3. Pay ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ရန်အာရုံစိုက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးပျက်စီးစေဖို့အတွက် AOX-QL စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator ယန္တရားမော်ဒယ်၏အလေးချိန်နှင့်အညီ load နှင့်ရြဖို့ forklift ကိုအသုံးပြုပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-QL စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-QL စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: သင်၏ Pack အသေးစိတ်ကိုကဘာလဲ?
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်